Public Health in Myanmar: Contraception Choices !
thank u very much that's good to read. may i ask one question in according with the women who is over 35 yrs old should not have next baby. i've got 10 yrs boy, and i am planning to have another child. but, whenever i talk to my wife she gives me so many reasons. SHE KEEPS SAYING SHE IS 38 YRS OLD IT IS NOT GOOD TO GET PREGNANT. DO YOU THINK SHE IS POSSIBLE TO GET NXET CHILD? looking forward to yours ans. ( i wish to type in burmese, but i don't get used to. happy new year...
စာဖတ်သူ ခင်ဗျာ ...
မိခင် အသက် ၃၅ ကျော် လျှင် ကလေး ပုံမှန် အခြေ အနေ မွေးဖွားရန် မလွယ်ကူ သဖြင့် မိခင် အတွက် ရော ကလေး အတွက် ပါ ချင့်ထောက် ၍ ကိုယ်ဝန် မယူသင့် မမွေး သင့်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
လိုချင်လို့ ယူမယ် ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ကလေး မရနိုင်ဘူး လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ ... ယူလို့ တော့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ ...
အသက် ၃၅ နှစ်ဆိုတာက အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ ဟော်မုန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေ စတင်ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့အချိန် ဖြစ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Down Syndrome ကလေးတွေကို မွေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို သုတေသန ပြုလုပ်ထားတာ အသက် ၃၀ ပြည့်ပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ အထူးသဖြင့် ၃၂ နှစ်နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေမှာ သိသိသာသာကြီးကို Down Syndrome ကလေးမွေးနှုန်းတက်လာတာ တွေ့လို့ သြစတြေးလျားနိုင်ငံ ( NSW ပြည်နယ်၊ တခြားပြည်နယ်မှာတော့အတိအကျမသိပါ) မှာ အခုဆိုရင် အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းကို မိသားစုဆရာဝန်တွေက ကြပ်မတ်ပြီး Down Syndrome အန္တရယ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးတာကို မလုပ်မနေရ လုပ်ရတယ်။
ကျွန်မ မှတ်ထားမိတာက အသက်(၃၅)နှစ်အထက်ဆိုတာ သားဦးဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ သိထားတာ။ ဒုတိယကလေး ထပ်ယူတာမျိုးဆို အန္တရာယ် မရှိလောက်ဖူးလို့ ထင်တာပဲ။ တစ်ယောက်ယောက် ပြန်ပြီး အချက်အလက် ရှာကြည့်ပေးပါလားဟင်။
ပြီးတော့ အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့ ပြကွက်ကလေးမှာ နည်းနည်းလေး ပြောချင်တယ်။
အတွင်းကွင်းက သားအိမ်ခေါင်းမှာ သွားပြီး စွပ်နေမှ အဆင်ပြေမှာ။ မဟုတ်ရင် နာတတ်တယ်။ အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံးသုံးတာက စနစ်မကျရင် တစ်ခါတည်းနဲ့ အရမ်းကြောက်သွားတတ်တယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် နေရာကျအောင် ထည့်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သုံးမိတဲ့ စကားလုံးက လွဲသွားလို့ ထပ်ရေးတာပါ။ အန္တရာယ် မရှိလောက်ဘူးဆိုတာ အများကြီး မရှိလောက်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။
(၃၅)နှစ်ကျော်ရင် ပြဿနာတွေ များတတ်တာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
Down ကို ရှာကြည့်တော့ အသက်လေးဆယ် အမျိုးသမီးတွေမှာတောင် ၁ရာခိုင်နှုန်းအောက်လို့ တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြန်ရှာကြည့်လိုက်တာမို့ စိတ်ချရတဲ့ သတင်းအချက် အလက် ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပါဘူး။ နားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။
ဒီပို့စ်ရဲ့ ပြဿနာက စကား အသုံးအနှုန်းလို့ ထင်တာပဲ။
" ကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့်တဲ့သူများ" ဆိုတာထက် " ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် အန္တရာယ်ပိုများနိုင်တဲ့သူများ"လို့ သုံးတာကမှ မှန်မယ်လို့ ထင်တယ်။
ဆရာစိုးထက် This sin is serious because you said I am hopeless. ( Just kidding! )
OK, OK ! I'll.
အမျိုးသမီး ၂၈ ရက်ရာသီ စက်ဝန်းကို သိပ်နားမလည်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် သိချင်တာက ၂၈ ရက် ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး အတွက်နောက် တစ်ခါ ပြန်ဖြစ်မဲ့ နေ့က ၂၉ ရက်မြောက်နေ့လားဆိုတာရယ် ပြီးတော့ ရက်ရှောင်နည်းက လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတာက အဲဒီရက် အတွင်းနဲ့ ရှေ့ ၇ ရက် နောက် ၃ ရက် ဆိုတာ အတိအကျပါပဲလား ....ဆိုတာ အရမ်းသိချင်နေလို့ပါ
ကို ဖတ်ကြည့်မှ ဖြေတာထက် ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ရက်ရှောင်တဲ့နည်းက သားဥ ကြွေနိုင်တဲ့ အချိန်တွေကို တွက်ပြီး ရှောင်တာပါ။
သားဥကြွေမယ့် ရက်ကို တွက်တဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို အဲဒီမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
မှာ ကြည့်ရင် သားဥကြွေတာကို တွက်ပြီး ရက်ရှောင်တဲ့ နည်းက ပထမနှစ်မှာ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်တဲ့ အနေအထားက ဆေးထိုးတာ၊ ဆေးသောက်တာထက် ပိုများနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ အတိအကျပဲလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မသေချာဘူးလို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသမီးဓမ္မတာမလာခင် ၁၀ ရက်က ၈၀% ကိုယ်ဝန်မရဖို့သေချာတယ်။ လာပြီး ၁၀ ရက်က ၁၀၀ % သေချာတယ် လို့ပြောဘူးတယ်။ အဓိက ကသားဥကြွေမဲ့ရက်ကိုရှောင်နိူင်ရင်ရပြီတဲ့။ အဲဒါဟုတ်လားလို့သိချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပီမိုးနှင်း စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာက ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်နဲ့အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ကိုရှောင်ရမယ်တဲ့။ အဲဒါက လုံးဝမှာနေတာပေါ့။ နောက်... ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိဆီးစစ်တဲ့ကိရိယာက အတူတူနေပြီးဘယ်လောက်လောက်ကြာမှစစ်ရင်သိနိူင်မလဲဆိုတာလဲပြောပြပေးပါခင်မျာ။
အမျိုးသားကထွက်တဲ့အရည်ကြည်မှာ သုတ်ကောင်ပါဝင်နိူင်ချေ ၆၀% ရှိတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
အဲဒီလိုဆိုရင် သုတ်ရည်ကိုအမျိုးသမီးကိုယ်ရဲ့ပြင်ပသို့စွန့်ထုတ်တဲ့ နည်လမ်းက တော်တော်စိတ်မချရတာပေါ့။